Thursday December 20, 2018 - 20:00:15 in Wararka by Mogadishu Times
OGAYSIIS WAA BIXINAYAA in calaamadda ganacsiga ee kor ku xusan tahay calaamadda ganacsiga ee: Facebook, Inc., a corporation organised and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A. of 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025,
OGAYSIIS WAA BIXINAYAA in calaamadda ganacsiga ee kor ku xusan tahay calaamadda ganacsiga ee: Facebook, Inc., a corporation organised and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A. of 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, United States of America
DIGNIINTA MARKA - OGEYSIISKA QALABKA
Facebook, Inc., a corporation organised and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A. of 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, United States of America
waxaana loo isticmaalaa iyadoo lala xiriirinayo: Qalabka kombiyuutarka; Software for xiriirka bulshada; Qalabka horumarinta software; Software si loogu isticmaalo interface interface program (API); Interface programming interface (API) ee loogu talagalay isticmaalka barnaamijyada dhismaha software; Interface programming interface (API) loogu talagalay software kaas oo fududeeya adeegyada internetka ee shabakadda bulshada iyo macluumaadka soo noqoshada, gudbinta, soo noqnoqda, helitaanka iyo maamulka; Software ee abuurista, maareynta, iyo dhexgalka bulshada online; Barnaamijka abaabulka dhacdooyinka; Barnaamijka ku saabsan abuurista, soo-dejinta, soo-dejinta, ka-wareejinta, gudbinta, soo-jeedinta, soo-deynta, soo-bandhigidda, soo-ururinta, shabakadaha internetka iyo isgaadhsiinta; Barnaamijka isbeddelka iyo awoodinta gudbinta sawirrada, muuqaalka maqalka iyo muuqaalka fiidiyowga; Barnaamijka wax ka bedelaya sawirrada, sawirada iyo maqalka, fiidiyoowga, iyo muuqaalka maqalka-muuqaalka leh ee sawirrada sawirada iyo saamaynta xaqiiqda (AR), taas oo ah, sawirrada, madadaalada, qoraalka, sawirrada, geotagaha, summadada metadata, hyperlinks; Barnaamijka loogu talagalay uruurinta, maamulida, hagaajinta, abaabulidda, wax ka beddelidda, gudbinta, wadaagga, iyo kaydinta macluumaadka iyo macluumaadka; Hannaanka ganacsiga e-macaamiisha ee la iibsan karo si loogu oggolaado in dadka isticmaala ay sameeyaan macaamil ganacsi elektaroonig ah iyada oo loo marayo shabakadaha caalamiga ah ee kombiyuutarka iyo isgaadhsiinta Software loo diro waraaqo fariin elektaroonig ah, ogaysiin iyo xasuusin; Software search engine software; Kaararka hadiyadeed ee qaali ah Software si loogu isticmaalo abuurista, maareeynta, qiyaasida, iyo faafinta xayaysiinta dadka kale; Server-ka, oo ah, kumbiyuutar kombuyuutar loogu talagalay keydinta xayeysiinta iyo bixinta xayeeysiinta boggaga internetka; Software si ay u suurtagasho horumarinta, qiimeynta, imtixaanka, iyo dayactirka barnaamijyada moobiillada moobiilka qalabyada isgaadhsiinta elektarooniga ah, sida, telefoonnada gacanta, telefoonka gacanta,kombiyuutarada gacanta iyo kumbuyuutarka kombiyuutarka; Software si loogu badalo luqadda dabiiciga ah amarrada mashiinka fulinta; Software, oo ah, isugeyn tarjubaan ah oo fududeynta isdhexgalka dadka iyo mashiinnada; Caawiye caawiye shakhsi ah; Barnaamijka kaalmada bulshada; Barnaamijka khidmooyinka khariidadda; Barnaamijka waxqabadka qorsheynta iyo sameynta talooyin; Barnaamijka loogu talagalay khariidada bulshada iyo goobta; Software ee sameynta boos celin iyo buundooyin; Software si loo dalbado / ama u iibiyo alaabo iyo adeegyo; Software-ku-meel-gaar ah ee raadinta, go'aaminta iyo wadaagida goobaha; Barnaamijka nuxurka akhbaarta, xogta iyo bixinta macluumaadka; Software si ay u suurtagasho helitaanka, soo bandhigida, u dejinta, isku xirka, wadaagista iyo bixinta warbaahinta elektiroonigga ah iyo macluumaadka iyada oo la adeegsanayo internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Software, oo ah, codsi bixiya adeegyo xiriir bulsheed; Barnaamijka abuurista, maareeynta iyo helitaanka kooxaha gudaha bulshada dhexdeeda; Software ee goob-raadinta iyo digniinta; Barnaamijka raadinta iyo aqoonsiga fursadaha shaqada; Barnaamijka aqoonsiga iyo u oggolaanshaha isticmaalayaasha inay la xiriiraan wakiillada dawladda; Software oo bixisa suuqa xorta ah; Barnaamijka bixiya macluumaadka cimilada ku salaysan goobta; Barnaamijka bixiya, isku xirnaanta, ama akhrista wararka ama dhacdooyinka hadda socda; Barnaamijka daaweynta iyo isdhexgalka oo ah quudinta sawirrada, maqalka, maqalka-muuqaalka iyo muuqaalka fiidiyowga iyo qoraallada iyo macluumaadka la xidhiidha; Software si aad u hesho daabacaadda content iyo content publish, iyo ku biiritaanka content; Barnaamijka loogu talagalay abuurista iyo maareynta qiyaasaha warbaahinta bulshada iyo xisaabta user; Software kaas oo u sahlaya shakhsiyaadka, kooxaha, shirkadaha, iyo calaamadaha si ay u abuuraan oo ay u sii wadaan joogitaan online ah ujeedooyin suuq ah; Barnaamijka loogu talagalay dadka xayeysiinta ah si ay ula xiriiraan oo ula falgalaan bulshada internetka; Barnaamijka loogu talagalay streaming multimedia madadaalo; Barnaamijka abaabulka dhacdooyinka; Software computer; Barnaamijka dirista iyo helitaanka fariimaha elektaroonigga ah,
digniino, ogeysiin, xusuusin, sawirro, sawirro, maqal iyo maqal muuqaal ah oo la adeegsanayo internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Software si loo dhameeyo sawirrada, sawirrada, maqalka, fiidiyowga, iyo qoraalka; Barnaamijka Maareynta Maareynta Isku-dubaridka Bulshada, Is-dhexgalka Bulshada Ganacsiga, iyo Isugeynta Sawirada, Cod-bixinta, Sawir-qaadashada iyo Fiidiyowyada, sawirada, fiidiyowga, xogta, qoraalka, farriimaha, faallooyinka, xayaysiinta, warbaahinta xayasiiska iyo macluumaadka; Software isticmaalka maareynta xiriirka macaamilka (CRM); Software messaging; Software si loo fududeeyo loona qorsheeyo maalgelinta iyo qaybinta lacag ururinta iyo deeqda; Barnaamijka loogu talagalay adeegyo lacag ururin oo lacag la'aan ah iyo adeegyada deeq-lacageedka.
Arrin daabacan; Daabacadaha; Jariidadaha; Buugaagta; Waraaqaha; Buugyada; Hagaha daabacan; Catalog; Sawirada; Shisheeye; Sawirada; Qoraalada; Kalandarka; Sawirada sawirada; Baaqyada; Qorista qalabka; Abaabulayaasha Shakhsi ahaaneed; Buugaagta cinwaanada; U fiirso buugaagta; Shuruudaha Xafiiska; Xiddigaha; Poster; Kaarka ganacsiga iyo kaadhadhka aqoonsiga; Qalabka; Kaararka hadiyadeed ee aan magnetka lahayn.
Bacaha, oo dhan, ujeedo kasta oo la qaato bacaha, bacaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee loogu talagalay dharka ciyaaraha, boorsooyinka bacaha, boorsooyinka buugta, qaadashada-dhamaan bacaha, boorsooyinka safarka, boorsooyinka duuganka, boorsooyinka, bacaha xeebta, boorsooyinka suunka, bacaha dhegta , bacaha qurxoon ee la isku qurxiyo waxay iibiyeen faaruq, bacaha jimicsiga; Dharka iyo dhadhanka maqaarka; Maqaarka xayawaanka iyo hargaha; Goolasha socdaalka; Isbaarooyinka; Ulaha socdaalka; Buugaagta jeebka; Shandadaha gacanta; Qataarada; Kiisaska kaararka deynta; Burooyinka sawirada; Kiisaska takhaatiirta; Dalladaha; Noocyada nooca baqshadda ah ee nooca baasaska ah; Bacaha ku xir
Sawir sawir leh.
Weelasha dabka lagu shubay ee cuntada iyo cabitaanka; Qaboojiyaha caagga ah ee la qaadan karo; Qalabka biraha la qaadan karo; Xeebaha ma ahan warqad iyo maaha dharka miisaska; Furayaasha dhejiska; Pitchers; Baaldiyo caag ah; Koobabka caaga ah; U adeegidda baayacmushka oo aan ahayn mid qaali ah; Meelaha dhoobada; Mugs; Koobabka; Cunnooyinka cabbitaanka xumbada; Dhalooyinka lagu kaydiyo; Waxyaabaha loo yaqaan 'glass and porcelain'; Sawirro laga sameeyay muraayadda, foornada, dhoobada, dhoobada, iyo shinni; Cabitaanka khamriga; Dhalooyinka biyaha ayaa la iibiyaa madhan.
Dumarka, iyo carruurta, dharka, shaatigaha, jaakadaha, dhalada, dharka dharka, suumanka, dharka jilicsan, jilicsan, jilbaha, jimicsiga, guluubka, hoosta, dharka, surwaalka, tiknoolajiyada, maskaxda, boogaha, balaashyada, gabaldhaca, labbiska, sharaabaadyada, dhididka, surwaalada dhididka ah, ciriiriga, dareeraha qorraxda; kabaha.
Bixinta adeegyada cilmi-baarista iyo adeegyada macluumaadka; Horumarinta badeecadaha iyo adeegyada dadka kale iyada oo loo marayo shabakadaha internetka iyo isgaarsiinta; Ganacsi iyo adeegyo xayeesiin, oo ah, qorshaynta warbaahinta iyo warbaahinta warbaahinta ee dadka kale; Ganacsi iyo adeegyo xayaysiis, sida, adeegyada xayeysiinta ee raadinta waxqabadka xayaysiinta, ee maareynta, qaybinta iyo adeegga xayaysiinta, si loo falanqeeyo xogta xayaysiiska, warbixinta xayaysiinta, iyo si loo hagaajiyo waxqabadka xayeesiinta; Adeegyada la-talinta ee dhinacyada xayeysiinta iyo suuq-geynta; Fududeynta is-weydaarsiga iyo iibinta adeegyada iyo badeecadaha dhinacyada saddexaad iyada oo loo marayo shabakadaha internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Bixinta suuqyada shabakada internetka ee iibiyaha alaabta iyo / ama adeegyada; Bixinta xarumaha internetka ee isku xirka iibiyaasha iibsadaha; Xiriirka ganacsiga; Adeegyada Shaqada iyo Shaqaaleynta; Xayaysiiska iyo adeegga qaybinta macluumaadka, oo ah, bixinta meel bannaan oo xayaysiis ah iyada oo loo marayo shabakadda kombuyuutarrada adduunka; Bixinta macluumaadka kombiyuutarada kombiyuutarka iyo macluumaadka ku-saleysan shabakada internetka ee ku yaala barta laga sooco; Adeegyada kaadhka hadiyadaha ee lacag-bixinta hore, oo soo saara caddaynta kaadhka hadiyadeed ee laga yaabo inay noqoto
lagu soo iibsaday badeeco ama adeegyo; Adeegyada mutadawacnimada ah, oo ah, kor u qaadida wacyiga dadweynaha ee ku saabsan sadaqada, deeqaha, mutadawacnimada, adeegga dadweynaha iyo bulshada iyo hawlaha bani'aadamnimada; Diiwaangelinta warbaahinta elektarooniga Maaraynta xidhiidhka macaamiisha; Adeegyada xayeysiisyada; Kala soocista xayaysiinta dadka kale iyada oo loo marayo shabakadaha internetka iyo isgaarsiinta; Horumarinta alaabooyinka iyo adeegyada dadka kale iyadoo la adeegsanayo qaybinta xayeysiinta fiidiyaha ee shabakadaha internetka iyo isgaarsiinta; Adeegyada xayeysiiska, yaa, bartilmaameedka iyo soo celinta xayeysiisyada internetka; Maareynta Ganacsiga; Maamulka ganacsiga, xafiiska hawlaha; La-tashiga Brand; Naqshadda qalabka xayaysiinta ee dadka kale; Bixinta wicitaanada ganacsiga ee internetka oo ka kooban ganacsiyada, badeecada iyo adeegyada dadka kale.
Adeegyada wax-qabadka dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha; Horumarinta elektarooniga iyo gudbinta xogta biilasha ee loogu talagalay dadka isticmaala internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Adeegyada bedelka macaamilka elektarooniga Kaarka deynta, kaarka bangiyada iyo kaadhka iibka hadiyadaha kaadhka; Adeegyada ganacsiga, sida, adeega lacag bixinta lacag bixinta; Bixinta adeegyada lacag-bixinta elekterooniga ah ee dadka kale; Adeegyada dhaqaalaha; Adeegyada lacag bixinta lacagta; Adeegyada macaamil ganacsi lacageed; Fududeynta iyo qabanqaabada maalgelinta iyo qaybinta lacag ururinta iyo deeqaha; Adeegyada lacag ururinta samafalka ee internetka iyo adeegyada deeq-lacageedka
Isbarashada sawirada iyo wadaagista fiidiyowga, oo ah, gudbinta elektarooniga ah ee faylasha sawirada, filim iyo muuqaal maqal muuqaal ah oo ka mid ah dadka isticmaala internetka; Isgaarsiinta; Bixinta helitaanka kombiyuutarka, macluumaadka elektarooniga ah iyo internetka; Adeegyada isgaarsiinta, oo ah, gudbinta elektaroonigga warbaahinta elektiroonigga, xogta, farriimaha, garaafyada, sawirrada, codka, fiidiyowga iyo macluumaadka; Bixinta shirarka internetka ee isgaarsiinta mawduucyada danta guud; Bixinta xidhiidhada isgaarsiinta ee internetka oo u wareejinaya aaladaha mobile iyo isticmaalayaasha internetka goobaha internetka ee gudaha iyo caalamka; Fududeynta helitaanka website-yada sadexaad ee sadexaad ama qaybta kale ee qaybta elektaroonigga ah ee ku jirta maadada adoo adeegsanaya marin guud oo guud; Bixinta qolalka lagu sheekeysto ee internetka, adeegyo fariimo deg deg ah, iyo boorsooyinka elektiroonigga ah; Adeegyada maqalka, qoraalka iyo fiidiyowga ee internetka iyo shabakadaha kale ee isgaarsiinta; Codka qarsoodiga internetka (VOIP); Adeegyada isgaarsiinta telefoonka; Bixinta helitaanka macluumaadka kumbiyuutarada kombiyuutarada ee dhinacyada isgaadhsiinta bulshada iyo hordhaca bulshada iyo shukaansiga; Isbarashada sawir-qaadista iyo wadaagista macluumaadka, sida faafinta elektarooniga ah ee faylasha sawirada, sawirrada iyo muuqaalka maqalka ee dadka isticmaala internetka; Isku daadin oo ku noolaan kara akhbaarta, maqal-dhageysiga, iyo maqal-dhex-dhexaad ah ee la adeegsado internetka; Teleconferencing; Adeegyada isgaarsiinta, oo ah, isgaarsiinta xogta iyo qaabilaada macluumaadka ee shabakadaha isgaarsiinta; Adeegyada isgaarsiinta telefoonka gacanta; Farriinta Webka; Adeegyada farriimaha is-gaadhsiineed; Is-beddelka elektarooniga codka, xogta, maqalka, fiidiyowga, qoraalka iyo garaafyada waxaa laga heli karaa shabakadaha internetka iyo isgaarsiinta
Adeegyada madadaalada; Bixinta helitaanka macluumaadka casriyeynta elektaroonigga ah iyo internetka ee moodhadhka isticmaalaha, daroogada saddexaad, sawirada, fiidiyowga, maqalka, muuqaalka, iyo maqal-muuqaal ah ee duurka guud ee danta guud; Adeegyada la wadaago sawiro iyo fiidiyowga; Adeegyada daabacaadda elektarooniga ee dadka kale; Daabacaadda qalabka waxbarashada, oo ah, daabacidda buugaag, joornaalo, wargeysyo, iyo daabacaad elektiroonig ah; Joornaalada internetka, oo ah, shabakado (blogs) oo ku jira content-user-qeexay; Qabashada iyo qabashada shirarka waxbarashada; Abaabulidda bandhigyo iyo dhacdooyin ku saabsan horumarinta barnaamijyada ujeeddooyin waxbarasho; Bixinta kombiyuutarka, macluumaadka elektaroonikada iyo internetka ee barta madadaalada; Adeegyada daabacaadda, sida, daabacaadda daabacaadda elektarooniga ah ee dadka kale; Adeegyada madadaalada, oo ah, inay bixiyaan tas-hiilaad online ah oo loogu talagalay akhbaarta madadaalada iyo fidinta video-ka ah munaasabadaha madadaalada; Bixinta macluumaadka madadaallada ee laga heli karo taxanaha la raadin karo iyo macluumaadka macluumaadka, oo ay ku jiraan qoraalka, dokumentiyada elektarooniga ah, macluumaadka, sawirrada, sawirada muuqaalka iyo macluumaadka muuqaalka maqalka, iyada oo loo marayo shabakadaha internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Adeegyada waxbarashada; Bixinta tababarka; Hawlaha cayaaraha iyo dhaqanka; Adeegyo iyo barnaamijyo waxbarasho, sida, bixinta filimaan aan la soo deyn karin, bandhigyo telefishan, shabakado, maqal-dhagaysi, iyo maqal-xirfadeed oo ka shaqeeya internetka, iyo sidoo kale macluumaad, dib-u-eegis, iyo talooyin ku saabsan filimada, bandhigyada telefishanka, websaydhyada,
maqalka iyo maqalkaNaqshadeynta iyo horumarinta qalabka kombiyuutarka iyo software; Adeegyada kombiyuutarada, kuwaas oo abuuraya bulshooyin farshaxan oo loogu talagalay dadka isticmaala diiwaangashan si ay u abaabulaan kooxo, shirar, iyo dhacdooyin, ka qaybqaataan doodaha iyo ka qaybqaataan isku-xirka bulshada, ganacsiga iyo bulshada; Adeegyada kombuyuutarrada, oo ah, martigalinta xarumaha elektarooniga ah ee dadka kale si ay u abaabulaan una qabtaan kulanno, munaasabado iyo doodo dhexdhexaadin ah iyada oo loo marayo shabakadaha internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta Adeegyada kombiyuutarka ee nooca elektaroonikada shakhsi ahaaneed iyo shakhsiyaadka kooxeed ama boggaga internetka ee ku jira macluumaadka isticmaale ama cayiman, oo ay ka mid yihiin, maqalka, fiidiyowga, sawirrada, qoraalka, content, iyo xogta; Adeegyada kombuyuutarrada, oo ah, inay bixiyaan makiinado raadin si ay u helaan xogta internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Bixinta qalabyada internetka oo leh tiknoolajiyad u suurtagelisa dadka isticmaala internetka in ay abuuraan qormooyin shakhsiyadeed oo ku saabsan macluumaadka xiriirka bulshada iyo ganacsiga, si loo wareejiyo loona wadaago macluumaadka noocyada kala duwan ee shabakadaha internetka si ay u galaan shabakad bulsho, iyo inay maamulaan xisaabtooda shabakadaha bulshada; Bixinta barnaamijka shabakadda bulshada, sameynta bulsho bulsho, iyo gudbinta codka, fiidiyowga, sawirrada, qoraalka, content, iyo xogta; Bixinta adeegga shabakada internetka ee u saamaxaya dadka isticmaala inay u wareejiyaan xogta aqoonsiga shakhsi ahaaneed iyo la wadaagaan macluumaadka aqoonsiga shakhsi ahaan iyo goobo internet oo badan; Bixinta macluumaadka laga helayo qaamuusyada la raadin karo iyo macluumaadka macluumaadka macluumaadka, oo ay ku jiraan qoraalka, dokumentiyada elektarooniga ah, macluumaadka, shaxanka, warbaahinta elektarooniga ah, sawirada muuqaalka iyo macluumaadka muuqaalka maqalka, iyada oo loo marayo shabakadaha internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Bixinta barnaamijka ganacsiga e-commerce si ay u oggolaadaan dadka isticmaala in ay sameeyaan macaamil ganacsi elektaroonig ah iyada oo loo marayo shabakadda kombiyuutarada adduunka; Adeegyada kombuyuutarrada, oo ah, bixiyaha adeegga codsiga ee ku jira barnaamijka barnaamijka barnaamijka codsiga (API) si loogu oggolaado in dadka isticmaala ay u sameeyaan macaamil ganacsi elektaroonig ah iyada oo loo marayo shabakadda kombiyuutarada adduunka; Software ahaan adeeg (SAAS)adeegyo ay software u dirto farriimo elektaroonik ah, ogaysiisyo iyo digniino, iyo fududaynta macaamil ganacsi elektaroonig ah si loo gudbiyo amarrada iyo dirista iyo helitaanka fariimaha elektaroonigga ah, iyo in loo ogolaado dadka isticmaala macaamil ganacsi elektaroonig ah shabakad kombuyuutar caalami ah; Bixinta software si loogu isticmaalo maaraynta, qiyaasidda, iyo adeegga xayeysiinta dadka kale; Bixiyaha adeegga codsiga oo ku jira barnaamijka barnaamijka codsiga barnaamijka API (API) ee maareynta, raadinta, warbixinta iyo qiyaasida qorsheynta warbaahinta, iibinta warbaahinta iyo xayaysiiska kuwa kale; Barta internetka ee iibka ad-iibsashada, oo ah, bixinta barnaamijyada aan la iibsan karin barnaamijyada u oggolaanaya iibsadaha iyo iibiyeyaasha xayeysiisyada internetka si ay u iibsadaan oo u iibiyaan liiska xayeysiinta; Adeegbixiyaha adeegga codsashada (ASP) oo ku saleeya software si loogu isticmaalo iibsashada, iibinta, naqshadeynta, maaraynta, raadinta, qiimaynta, wax-ka-beddelka, bar-tilmaameed, falanqaynta, bixinta, iyo ka warbixinta xayeysiisyada internetka iyo suuq-geynta; Bixinta barnaamijka horumarinta karti-gelinta, qiimeynta, imtixaanka, iyo dayactirka barnaamijyada moobiillada moobiilka ee aaladaha la isku-dhafan yahay; Bixinta adeegyo caddaynta isticmaalaha iyadoo la adeegsanayo teknoolajiyada teknoolajiyada iyo teknoolajiyada barnaamijyada ganacsiga e-commerce; Bixinta adeegyada aqoonsiga isticmaale ee wareejinta lacagta elektaroonigga ah, kaarka amaahda iyo kaarka deynta iyo macaamilada elektaroonigga ee elektarooniga ah iyadoo la adeegsanayo teknoolajiyada iyo teknoolojiyada software Bixinta barnaamijka codsiga barnaamijka (API) si loogu oggolaado in dadka isticmaala ay u sameeyaan macaamil ganacsi lacageed oo ganacsi ah iyada oo loo marayo internetka; Bixinta software si loo isticmaalo lacagaha elektarooniga ah; Platform sida adeeg (PAAS) adeegyo oo u adeegaya barnaamijka si loogu oggolaado isticmaalayaasha in ay sameeyaan macaamil ganacsi iyo ganacsi e-ganacsi; Bixinta barnaamijka barnaamijka barnaamijka codsiga (API) ee isticmaalka farriimaha elektiroonigga ah iyo gudbinta dhawaaqa, fiidiyaha, sawirrada, qoraalka, content iyo xogta; Bixinta barnaamijka fariinta elektaroonigga ah; Adeegyada Khariidadaha; Bixinta barnaamijka adeega maabeynta; Adeegbixiyaha adeegga codsashada (ASP) oo leh barnaamijyo loogu talagalay adeegyada maareynta; Bixinta barnaamijka wadaagista iyo soo bandhigida goobta adeegsiga, qorshaynta waxqabadyada dadka isticmaala iyo sameynta talooyin; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) oo leh barnaamijka si loo sahlo ama loo fududeeyo wadaaga iyo muujinta goobta adeegsiga, qorshaynta waxqabadyada dadka isticmaala iyo sameynta talooyin; Bixinta barnaamijka khariidada bulshada iyo goobta; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) ee barnaamijka u leh barnaamijka si loo suurtageliyo ama loo fududeeyo khariidada bulshada iyo goobta; Bixinta barnaamijka loogu talagalay samaynta boos celin iyo joornaalo; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) ee barnaamijka u leh si loo suurtageliyo ama loo fududeeyo sameynta boos celin iyo buundooyin; Bixinta barnaamijka amarka iyo / ama iibsashada badeecadaha iyo adeegyada; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) ee barnaamijka u leh si loo suurtageliyo ama u fududeeyo amar iyo / ama iibsami karo alaabo iyo adeegyo; Bixintasoftware-ku-ogyahay ee raadinta, go'aaminta iyo wadaagida goobta alaabta, adeegyada iyo dhacdooyinka xiisaha leh; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) oo leh bandhig barnaamijka meesha ku oolka ah ee raadinta, go'aaminta iyo wadaagida meesha alaabooyinka, adeegyada iyo dhacdooyinka xiisaha leh; Bixinta barnaamijka abuurista, maareynta iyo helitaanka kooxo gaar ah oo la abuuray loona maamusho bulshooyinka wafaqsan; Bixinta barnaamijka raadinta iyo aqoonsashada goobaha xaafadaha iyo goobaha ku saleysan xiisaha, dhacdooyinka, calaamadaha, fursadaha shaqada, madadaalada, dhacdooyinka dhaqameed, dukaamaysiga iyo bandhigyada; Bixinta barnaamijka raadinta iyo aqoonsashada fursadaha shaqada; Bixinta barnaamijka aqoonsiga iyo u oggolaanshaha isticmaalayaasha inay la xiriiraan wakiillada dawladda; Bixinta barnaamijka siinta goob ganacsi oo xariif ah; Bixinta barnaamijka siinta macluumaadka cimilada ku salaysan goobta; Bixinta barnaamijka siinta, isku xirida, ama akhbaarta wararka ama macluumaadka dhacdooyinka hadda; Platform sida adeeg (PAAS) oo leh bandhigyo software si loogu isticmaalo iibsashada iyo faafinta xayaysiinta; Bixinta barnaamijka wax ka bedelista sawirada, sawirada iyo maqalka, fiidiyowga, iyo maqalka fiidiyowga leh sawirrada sawirada iyo saameynta xaqiiqda (AR), kuwaas oo ah jaantusyada, dhaqdhaqaaqyada, qoraalka, sawirrada, jotaalka, qoraalka metadata, hyperlinks; Bixinta barnaamijka daawashada iyo isdhexgalka xayeysiinta warbaahinta elektiroonigga ah, sida sawirrada, maqalka-muuqaalka iyo muuqaalka fiidiyowga, fiidiyowga soo-nooleynta, faallooyinka, xayaysiinta, wararka, iyo internet-ka; Bixinta barnaamijka si loo helo maadooyinka iyo daabacayaasha content, iyo ku biiritaanka content; Bixinta qaabeynta sawirrada, fiidiyowga, iyo maqal-muuqaalka-muuqaalka iyadoo la adeegsanayo tagsiyada metadata; Bixiyaha adeegga codsadaha (ASP) ee ku shaqeeya barnaamijka shabakadda bulshada, maareynta shabakadaha bulshada, abuurista bulsho bulsho, iyo gudbinta sawirrada, maqalka iyo muuqaalka fiidiyowga, sawirrada, fiidiyowyada, xogta, qoraalka, farriimaha, xayaysiinta, warbaahinta xayeysiinta warbaahinta iyo macluumaadka; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) oo ku jira barnaamijka barnaamijka barnaamijka API (API) kaas oo fududeeya adeegyada internetka ee shabakadda bulshada, horumarinta barnaamijyada software; Platform sida adeeg (PAAS)oo ka dhex muuqda shabakadaha internetka, maareynta shabakadaha bulshada, maareynta bulsho bulshadeed, abuurida sawirro, muuqaal maqal iyo muuqaal ah, sawirro, fiidiyowyo, xog, qoraal, farriimo, xayaysiin, warbaahinta xayeysiisyada warbaahinta iyo macluumaadka; Kiraysiga software ee siinaya dadka isticmaala awoodda ay u leeyihiin in ay upload, edit, iyo wadaagaan sawirrada, videos iyo maqal-maqal muuqaal ah; Adeegyada kombuyuutarrada, kuwaas oo ah, inay soo habeeyaan mawduucyada internet-ka ee lagu qeexay iyo xayaysiinta iyo abuurista warbaahinta bulshada; Bixinta barnaamijka sawir qaadista iyo duubista maqalka, maqal-muuqaal iyo muuqaal fiidiyow; Bixinta barnaamijka ku-soo-rogidda, soo-dejinta, qorista, awood-siinta gudbinta, iyo wadaagida sawirrada, maqal-muuqaalka iyo muuqaalka fiidiyowga iyo qoraallada iyo macluumaadka la xidhiidha; Bixinta barnaamijka loogu talagalay streaming multimedia madadaalada; Bixinta barnaamijka loogu talagalay abuurista iyo ilaalinta joogitaanka internetka ee shakhsiyaadka, kooxaha, shirkadaha, iyo walxaha; Bixinta barnaamijka xayeysiinta si ay ula xiriiraan oo ula falgalaan bulshada internetka; Bixinta qalabka caawinta shakhsi ahaaneed; Bixinta barnaamijka kaalmada bulshada; Bixinta adeegyo internet ah oo ku-meel-gaadhsiis ah adeegsiga aan la iibsan karin ee loo diro iyo helitaanka farriimaha elektiroonigga ah, farriimaha degdegga ah, fariimaha elektaroonikada iyo xasuusinta, sawirrada, sawirrada, garaafyada, xogta, maqalka, fiidiyoowga iyo muuqaalka maqalka ee shabakadda internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Bixinta adeegsiga software-ka si loo fududeeyo codka taleefanka internetka (VOIP), wicitaanada taleefannada, wicitaanada fiidiyowga, fariimaha qoraalka ah, fariin elektaroonik ah, fariin deg deg ah, iyo adeegyada shabakada internetka ee internetka; Adeegyada adeega adeega codsadaha (ASP) ee barnaamijka u leh barnaamijka si ay u suurtagasho ama u fududeeyaan codka internetka (VOIP) wicitaanada, wicitaanka telefoonka, wicitaannada fiidiyowga, fariimaha qoraalka ah, fariin elektaroonik ah, fariin deg deg ah, iyo adeegyada shabakada internetka ee internetka; Bixinta barnaamijka loogu talagalay isticmaalka iyo sameynta sawirrada iyo duubista iyo fiidiyo fiidiyowyada; Adeegbixiyaha adeegga codsashada (ASP) oo leh barnaamijka u suurageliya ama u fududeeya qaadashada iyo hagaajinta sawirada iyo duubista iyo fiidiyoowga fiidiyoowga; Horumarinta software; Bixinta software online; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP); Bixinta tas-hiilaad online ah oo siiya dadka isticmaala awoodda ay u leeyihiin in ay u gudbiyaan, wax ka badalaan una wadaagaan maqalka, fiidiyowga, sawirada muuqaalka, qoraalka, garaafyada iyo xogta; Bixinta barnaamijyada iyo codsiyada maareynta xiriirka macaamiisha (CRM); Adeegyada sayniska iyo teknoolajiyada iyo cilmi baarista iyo naqshadaynta ee la xidhiidha; Falanqaynta warshadaha iyo adeegga cilmi baarista Bixinta barnaamijka fududeynta iyo qabanqaabada maalgelinta iyo qaybinta lacag ururinta iyo deeqaha; Bixinta barnaamijka adeegyo lacag ururin ah oo lacag la'aan ah iyo adeegyada deeq-lacageedka.
Hotel, makhaayad, iyo adeegyada baraha.
Hawl-galinta bulshada, adeegga shabakadda iyo shukaansiga; Bixinta helitaanka macluumaadka kumbiyuutarka kombiyuutarka iyo macluumaadka macluumaadka laga heli karo internetka ee shabakadaha xiriirka bulshada, barashada bulshada iyo shukaansiga; Bixinta macluumaadka ku saabsan horumarinta shakhsi ahaaneed, is-nadiifinta, is-farsamaynta, samafalka, deeq-bixiyeyaasha, tabaruce, adeegyada dadweynaha iyo bulshada, iyo hawlaha bani-aadamnimada; Bixinta adeegyo xiran oo loogu talagalay dadka kale, kuwaas oo ah fududeynta iibsashada, fududeynta iibsashada, diyaarinta dhalmada, sameynta qorshe shakhsiyeed, bixinta talooyin ku saabsan alaabta iyo adeegyada, bixinta macluumaadka macaamiisha gaarka ah si loo daboolo baahida shakhsi ahaaneed, iyo bixinta xasuusinta elektaroonikada iyo ogaysiisyada; Adeegyada xiriirka bulshada ee internetka; Adeegyada xaqiijinta isticmaalaha; Adeegyada xaqiijinta aqoonsiga; Adeegyada xaqiijinta aqoonsiga ganacsiga
OGAYSIIS WAXAA KA BIXINAYaa in dacwad sharciyeed lagaga qaadi doono qof kasta ama shirkad isticmaala calaamada ganacsiga ama wax kasta oo la midabtakooro ama si kale u jebiya xuquuqda shirkaddaas